Ianaro ny fomba fanesorana mange tanteraka amin'ny alika voajanahary | Tontolo alika
Aretin-koditra ny scabies ny alika dia mivoatra ary ateraky ny mites mikraoskaopy, izay mety hiteraka tsy fahazoana aina betsaka amin'izy ireo. Misy kilasy maromaro, ny roa amin'ireo lehibe dia ny mange sarcoptic, izay ampitaina rehefa mifandray amin'ny alika marary hafa ny alika; ary ny iray kosa dia mange demodectic izay ampitaina avy amin'ny reny mankany amin'ny tanora raha mbola andro vitsivitsy aorian'ny nahaterahany.
fa, Inona avy ireo soritr'aretina ary ahoana no itondrana azy? Misy fanafody mahomby ao an-trano?
1 Ahoana no fanasitranana ny mange amin'ny alika?
2 Misy fanafody an-trano mahomby ho an'ny alika?
2.1.1 Ny fomba fampiasana
2.2 Vinaingitra cider apple
2.2.1 Ny fomba fampiasana
2.3.1 Ny fomba fampiasana
3 Ahoana ny fomba hisorohana ny mange amin'ny alika?
4 Inona no mangana amin'ny alika?
4.1 Ahoana ny fanaparitahana azy?
4.2 Ahoana no ahafantarako raha manana alika ny alikako?
Ahoana no fanasitranana ny mange amin'ny alika?
Misy sokajy fanafody isan-karazany, toy ny antiparasitika am-bava sy am-bava, ary koa ny menaka, izay manasitrana ny hoditra. Na izany aza ary mba hiasan'izy ireo, ny zavatra rehetra dia hiankina amin'ny karazana mange sy ny karazana alika. Ankoatry ny zava-mahadomelina, dia misy koa karazana fitsaboana isan-trano izay azo omena alika kely na alika olon-dehibe mba hanamaivanana ny mangidihidy, ny fanaintainana ary ny fahasosorana ateraky ny mange.
Misy fanafody an-trano mahomby ho an'ny alika?
Ny fanafody an-trano dia mety ho fanamaivanana lehibe ho an'ny alika, ary koa eo noho eo satria afaka atao ao an-trano izy ireo. Na izany na tsy izany, zava-dehibe ny hahafantaranao fa tsy hanampy anao hanasitrana ny scabies izy ireo, fa afaka manampy kosa:
Na dia toa tsy izany aza, omeo fandroana tsara ilay alika miaraka amin'ny savony sy rano be Izy io dia iray amin'ireo fitsaboana tsara indrindra ho an'ny scabies, izy io koa no fanafody tsotra sy mora azo indrindra ahafahanao manafoana ny scabies demodectic.
Ny toetoetran'ny savony mitazona ny scabies ho voafehy ary miaraka amin'izay dia manala ireo katsentsitra mahatonga azy io. Izy io koa dia manampy amin'ny fanafoanana ny fivontosana sy ny fanesorana ny loto, ny diloilo ary ny fako izay matetika miangona amin'ny hoditra.
Fenoy rano savony mafana be dia be ny siny, avy eo manomboka mandro ny alikanao amin'ny fikosehana mafy ny vatany iray manontolo araka izay tratranao, mba manala ny farantsakely kely indrindra.
Vinaingitra cider apple
Ny vinaingitra paoma madio dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo fomba holistic tsara indrindra azo tsaboina ny sakamalaho. Noho ny toetrany dia mamela tontolo asidra hamboarina eo amin'ny hoditry ny alika izy io, ka mahafaty ny bakteria sy ny totoka.
Omeo bata ny biby fiompinao a shampooing fanafody sy servieta maina; avy eo afangaroy ny vinaingitra paoma aprily antsasaky ny vera amin'ny borosy antsasaky ny vera sy rano mafana antsasaky ny vera ao anaty siny. Atsofohy ao anaty siny ny servieta madio ary atombohy kosehina amin'ny vatan'ny alika ilay fangaro. Tokony ho azonao antoka fa tsy manomboka milelaka izy, satria mila maina voajanahary ny hodiny.
Fomba iray hafa hampiasana azy io manampy vinaingitra cider vera vitsivitsy paoma ao amin'ny sakafon'ny alika.
Ny atin'ny asidra misy ranom-boasarimakirana dia mety amin'ny famonoana katsentsitra sy farantsakely, ankoatry ny fanafainganana ny fizotran'ny fanasitranana amin'ny hoditra voadona. Tokony ho fantatrao fa ny ranona voasarimakirana madio dia mety hanelingelina ny ratr'ilay alika, noho izany dia ampirisihinay hampihena azy alohan'ny hampiasana azy.
Tetehina antsasaky ny voasarimakirana iray ary apetaho amin'ny spaonjy ny ranony avy eo kosehio amin'ny spaonjy amin'ny fonon'ny alika ny spaonjy. Azonao atao ihany koa ny mampifangaro rano mitovy sy ranom-boasarimakirana ao anaty lovia, mandena ny spaonjy, ary avy eo manosotra azy amin'ny vatan'ny alika.
Tsy maintsy averinao isan'andro ny fanafody.
Ahoana ny fomba hisorohana ny mange amin'ny alika?
Ny fomba mahomby indrindra hisorohana ny scabies amin'ny alika dia amin'ny alàlan'ny fampiharana antiparasitics. Misy karazany samy hafa: spray, collars, pipettes, pills ... Afaka mividy iray ho an'ny biby fiompinao ianao ity rohy.
Ho an'ny mahamety azy -ary noho ny fahamorany hametrahana azy- dia tena mamporisika ny pipet izahay, izay toy ny tavoahangy plastika tena kely (eo amin'ny 2cm eo ho eo na latsaka), izay apetraka ao amin'ny vozon'ny biby, indray mandeha isam-bolana na isam-bolana vitsy arakaraka ny marika.
Mazava ho azy, na iza na iza no hapetranao amin'ny alikao dia tsy maintsy ataonao izay hahomby amin'ny bibikely, satria raha tsy izany dia tsy ho afaka hiaro azy ireo amin'ny scabies izy ireo.
Inona no mangana amin'ny alika?
Sary - Flickr / AmazonCARES
La lagaly aretina io dia mety hisy fiatraikany amin'ny karazam-biby maro, toy ny alika, saka, ary na olona mihitsy aza. ny koroka izany no mahatonga azy io rehefa tonga any amin'ny hoditra izy ireo, mipetrapetraka ao ary manomboka mihinana sela.
Saingy tsy mifarana eo ilay zavatra fa ireo katsentsitra ireo dia miteraka be dia be sy haingana, ka tena ilaina ny mamantatra azy faran'izay haingana.
Ahoana ny fanaparitahana azy?
Misy lalana roa mifindra amin'ny areti-mifindra: ny iray dia amin'ny alàlan'ny fifandraisana mivantana, ary ny iray kosa amin'ny alàlan'ny zavatra nampiasanao, toy ny lamba firakotra, fandriana, kilalao sns. Noho io antony io, raha misy biby roa na maromaro ao an-trano, dia zava-dehibe ny hitahirizana ny olona marary tsy hiala amin'ny ambiny mba tsy hisian'ny olana.
Ahoana no ahafantarako raha manana alika ny alikako?
Ny fambara mahazatra an'ity aretina ity dia:
Fahasosorana amin'ny hoditra
Ho fanampin'izay, misy ny hafa toa ny fahasosorana, tsy fahazoana aina amin'ny ankapobeny, ary fahasosorana mety hiseho vokatry ny fivontosana.
Toy ny hoe tsy ampy izany dia tokony hotadidinao fa amin'ny ankapobeny, ny scabies dia mitarika fampandrosoana aretina bakteria faharoa izay aretin-koditra izay mampangidihidy ny alika ary miteraka fofona ratsy ihany koa. Ny karazana mangahazo matanjaka indrindra dia ny pododermatitis demodectic, satria mazàna mikatona amin'ny aloky ny alika izy ary mamela ny aretina mikraoba.
Manantena izahay fa nahasoa anao io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Ahoana ny fomba hitsaboana ny mange amin'ny alika miaraka amin'ny fanafody ao an-trano
cecilia thebes dia hoy izy:
Salama, manana ny alikako miaraka amin'ny demodex genereliza aho. Mila fantatro hoe manao ahoana ny fandroana sy ny fitsaboana amin'ny hoditra. MISAOTRA
Mamaly an'i Cecilia tebes
Azonao atao ny mandro ny alikanao amin'ny shampooing manokana omen'ny mpitsabo anao. Ity vokatra ity dia hanampy ny alikao handresy ny aretina.
Tokony handro im-betsaka araka izay lazain'ny matihanina aminao ianao amin'ny fampiasana fonon-tànana.
Valiny tamin'i Monica Sánchez
Salama, mila fanampiana aho, ny alikako kely 8 volana dia misy scabies manodidina ny masony, izay ny tolo-kevitra an-trano arosonao.
Omby Yoselin dia hoy izy:
Salama, azafady azafady, manana alika kely 3 volana aho ary efa nentiko tany amin'ireo mpitsabo biby tsy mitovy ary tsy misy manasitrana ny vatany iray manontolo miaraka amin'ny scabies.
Mamaly an'i Yoselin vaca
Azonao atao ny mametaka crème aloe vera voajanahary ao aminy, fa ny tolo-kevitry ny mpitsabo biby dia hanome shampoo anao hitsaboana azy. Azoko atao ihany koa ny manolo-kevitra ny hitsaboana azy amin'ny alàlan'ny pipette antiparasite marika Advocate, izay mamono ny kongana.
Ny fitsaboana dia mety ho lava be, saingy tsikelikely dia tokony hahita fanatsarana ianao.
Salama alika kely 3 volana, nilatsaka ny volony ary mikorisa be izy. Misy teboka mena ny tongony, azoko antoka fa maimbo izany. Inona no ataoko?
Leslie Torres dia hoy izy:
Salama, voan'ny aretin-koditra ny alikako, voatsabo izy saingy ny fanontaniako dia avy any anatiny izy, inona no azoko atao mba tsy hifikitra amintsika io? Tokony hampisarahako azy tsy ho eo amintsika ve izy?
Valiny tamin'i Leslie Torres
Ny zavatra tsara indrindra amin'ireto tranga ireto dia ny fampidirana azy ao amin'ny efitrano iray sy hitazomana ny orinasany. Ilaina ihany koa ny fanarahana fitsaboana veterinera amin'ny scabies ary fanadiovana be any an-trano.
Ny mangahazo amin'ny alika dia tsy mila areti-mifindra amin'ny olona, ​​ary koa ny karazana mange, satria tsy mitovy ny bakteria rehetra.
Julieta dia hoy izy:
Ny mpitsabo dia nanendry savony famonoana bibikely antsoina hoe scabisin ary nilaza tamiko handro mandritra ny 4 herinandro indroa isan-kerinandro ny alahady sy alakamisy ho an'ny alikako telo volana iray poodle. Ho fanampin'izay, manasa ny faritra ipetrahany amin'ny rano mafana, savony sy klôro aho, ary manova ny fandriany isaky ny mandro azy aho dia nividy ny kitapony talcum tamin'i Bayer ary napetako taminy rehefa tsy tao amin'ny efitra fandroana, na nasiana «spray» antsoina hoe parasy PPT. Nasiako menaka oliva madio koa io. Fa tapa-bolana lasa izay no nitondrako azy toy izao ary tsy hitako izay fihatsarany, manohy mikorisa foana izy matetika ary androany dia tsapako fa misy mony mivoaka avy amin'ny taolan-tehezany sy ny lohany. Tsy haiko izay hatao hanampy ahy.
Salama Juliet, afaka manasitrana azy ve ianao?
Matetika dia lava be ny fitsaboana scabies, ao anatin'ny tapa-bolana dia tsy hanjavona izy io, azonao omena crème aloe vera voajanahary ary ny tena zava-dehibe dia ento any amin'ny mpitsabo biby, fa araka ny nolazaiko taminao, roa herinandro monja dia fotoana kely dia kely ho an'ny alikanao no sitrana na mahatsikaritra fanatsarana.
kaila dia hoy izy:
Salama, tsy haiko ny manao azy, ny alikako manana scabies amin'ny rambony, karazany boxer izy, azafady raha misy mahalala izay hatao fa haingana sy mora, maneho hevitra ary raha mahafantatra zavatra mety ianao ho an'ny tapakila sy parasy, mila izany koa? !! MISAOTRA
Mamaly an'i Keila
Ny zavatra tena atolotra anao dia ny hitondranao azy any amin'ny mpitsabo biby mba hahafahany mametraka ny fitsaboana sahaza indrindra amin'ny raharaha momba azy.
Azonao atao koa ny manampy azy amin'ny alàlan'ny fametrahana pipet antiparasitika izay manala ny kongana, parasy ary ny kongona izay ho hitanao amidy any amin'ny magazay biby.
Voninkazo Mey dia hoy izy:
Tsara ary naka alika roa teny an-dalana aho ary tena ratsy ny hoditr'izy ireo, tsy mazava amiko any amin'ny mpitsabo biby inona izany, fa ambonin'izany rehetra izany, ny vavy dia sola dia somary sola, omeko azy ireo miaraka amin'ny procox izay indray mandeha monja 15 andro Ny fandroana dd dia malemy intelo isan-kerinandro ary manadio indray mandeha isan-kerinandro miala ny efitrano misy azy ireo dia manadio azy roa heny amin'ny solifotsy sy bebe kokoa ny paoketra ary ny lamba firakofana manova azy ireo indroa isan'andro izay manasa azy ireo amin'ny degre 90 satria ny milina fanasan-damba tsy miasa maripana bebe kokoa, misy zavatra hanamaivanana ny spikes ary hanafainganana ny fitsaboana ary torohevitra vitsivitsy hiarovana ny alika hafa
Valiny tamin'i May Flores
Tsy misy na inona na inona hanafainganana ny fomba. Miala vetivety ny scabies, fa miala ihany amin'ny farany.
Ho an'ny mangidihidy dia mety hahasoa anao ny crème aloe vera voajanahary. ?
Valiny tamin'i Lurdes
Ho an'ny crème aloe izao dia mendrika ny olon-kendry madio amin'ny zavamaniry, misaotra betsaka, mahamenatra ny mahita azy ireo voavonjy
Azafady, manana alika misy scabies aho, fa rehefa nitondra azy tany amin'ny mpitsabo biby aho dia efa tena nandroso tokoa, nomen'izy ireo fitsaboana izy ireo fa ny ampahany miondrika ny tongony eo aloha dia efa tsy misy hena. Hitan'ny mpitsabo biby ny taolany, hoy izy fa hanasitrana azy fotsiny izy, marina izany?
Izay. Ho sitrana tsikelikely izy io.
Carolina Castro dia hoy izy:
Salama, mitovy amin'ny zava-mitranga amin'ny zanako kely io, nahavita nanasitrana izy. Tiako ny hevitrao.
Valiny tamin'i Carolina Castro
Ghilda pacheco dia hoy izy:
Hahahaha, fihomehezana inona no nahatonga ahy hiteny hoe handeha ho any amin'ny veterinera, raha izany no antony nahatongavantsika teto, satria tsy mahalala ireo bastard ireo raha tsy mitaky vola. Naka alika nangoniko avy teny amin'ny arabe aho, mba hilazana ahy raha manana angidiny na tsia izy nefa tsy nanao fandalinana akory dia nilaza tamiko tamin'ny tanany teo am-balahany fa tsy scabies izy io, fa voakaikitry ny alika hitany. eny an-dalambe. Eny, nino azy aho ary iray volana taty aoriana dia voan'ny otrikaretina kokoa ny hodiny, tadidio fa nandro azy tsy tapaka aho ary ny tena atahorako dia ny hamindrany ny alika hafa.
Valiny tamin'i Ghilda Pacheco
Ireo lahatsoratra ho hitanao ao amin'ny bilaogy dia fampahalalana fotsiny. Ho an'ny fakan-kevitra momba ny veterinary, ny tena tsara dia ny manatona olona matihanina.
Momba ny scabies, angamba afaka manampy anao (na ny tena izy, ny alikanao 🙂) mandro azy miaraka amin'ny gel aloe vera. Izy io dia hampitony ny mangidihidy sy hamandoana ny hoditrao.
Raha azonao atao dia miezaha haka Advocate amin'ny pipet (tavoahangy plastika tena kely ao anatiny izy ireo izay ilay antiparasite ranoka). Hofoanany ireo katsentsitra, na ivelany na anatiny.
Juan Esteban dia hoy izy:
Hahaha satria ny tompon'ity pejy ity dia tena mpitsabo vavy, ka izany no antony itenenan'izy ireo anao ho any amin'ny mpitsabo vavy
Valiny tamin'i Juan Esteban
Marina izany ... raha vao manatona ny alika ianao, dia manindrona anao ny mpitsabo avy / 3540 euro ny fitsidihana anao ary lasa misavoritaka kokoa ianao any, ary indraindray dia afangaron'izy ireo ny alikaola sy ny tsy fahampian-tsakafo manizingizina ny hanao fitsapana ny allergy izay tena lafo tokoa raha hijery raha nanova fihetsika kely izy ireo fa tsy mety ny vaksinina, inona ny fanafody, mitentina 2 euro aho satria mahatratra 40 euro ny vidin'ity vaksiny ity, tsy azoko ... raha ny scabies, ny fandroana Namboarina tamin'ny volom-bary, manala ny mangidihidy ilay izy satria emollient tsara aorian'ny fandroana ara-dalàna Mandrahoina bran-barley eran-tànana ao anaty rano iray litatra, ampandalovina ao anaty tatatra iray, avelao hampangatsiatsiaka, manana hafanana mafana, ary araraka eran'ny faritra rehetra vatana, azo alemana anaty rano mandritra ny alina ihany koa, ary ampiasaina ara-dalàna aorian'ny fandroana, na dia mitrandraka ireo mpitsabo biby aza isika indraindray dia tsy manana ny tolo-kevitr'izy ireo hanasitrana volony
Mamaly an'i nicole
Salama, na dia mety tsy mino an'izany aza ianao dia nositraniko ny alikako izay nisy fako niaraka tamin'ny tain'ilay plantain na plant banana.
Salama Patricia, tena mahaliana ny zavatra niainanao. Manana chow chow aho izay misy scabies ary tiako ho lazainao amiko ny nataonao. misaotra tamin'ny valiny
Nisy alika tonga avy teny amin'ny arabe fa manana ny masony marina izy ary satria hiteraka izy dia tsy afaka nandro araka ny tokony ho izy.
Manana izany miaraka amin'ny volomparasy, scabisan, fitambarana tongolo lay misy voasarimakirana sy glycerine aho. Tsy dia maratra intsony izy fa androany nanampy menaka oliva aho ary amin'ny alina dia hametraka azy indray ilay crème scabisan.
Ny tsy tiako dia ny hamindrany ireo alika kely tsara tarehy 3 ananany ary nasiako menaka oliva kely izy ireo hiarovana ny hoditr'izy ireo.
Nolazain'izy ireo tamiko izany tamin'ny rano ranomasina. Ireo izay afaka miditra amoron-dranomasina sy afaka mitondra ny alikany voany dia manao izany.
Ho an'izay mametraka ny lamba raky amin'ny milina fanasan-damba dia alao misaraka ihany izy ireo na apetraka fotsiny ny baoritra dia ario fa ny aretin-koditra dia mety hamindra ary mitandrina.
Miarahaba an'ireo olona tsara tarehy rehetra izay tia alika sy manome azy ireo kalitao fiainana 🙂
Misaotra tamin'ny hevitrao. Azo antoka fa mety amin'ny olona iray izany. 🙂
Voninkazo garcia dia hoy izy:
Bonjour, nisy paty tsy nisy volo ny puppy ... Nentiko tany amin'ny veterinera izy ary nilaza tamiko izy fa misy mangidihidy ary azo atao izany fa ny fanosorana crème in-telo isan'andro dia nesorina. ??? Herinandro taty aoriana dia nanasa azy aho ary nisy iray nifoha ary tamin'io andro io dia nentiny tany amin'ny dokotera hafa izy, nilaza tamiko izy fa holatra satria misy scab ilay izy dia natsindroko azy ary nasaiko noharatany manodidina ilay patch ary nasiana crème ary dia izany. ataoko fa androany aho nanao crème dia tsikaritro fa manana kely hafa izy ... tsy hitako intsony izay hatao, tsy manam-bola intsony aho fa tsy manana asa ny vadiko, nanao fanadihadiana aho dia nahita. fa mety ho scabies na moka izany ka tonga saina aho ny nanasa azy tamin'ny savony solifara, mba hanamarina fotsiny aho na tsia ary ohatrinona no handroako azy?! ????
Valiny tamin'i Flor García
Azonao atao koa ny manandrana mandro ny alikanao amin'ny karazana savony tsy mitongilana pH, izay misy antiseptika sy fananana bakteria, tsy misy fofona na singa misy poizina ho azy ireo.
Azo antoka fa hiasa ho anao izy io.
Androany aho dia nanomboka tamin'ny farany ary rehefa efa nampihatra ny crème ity andiany ity. Misaotra indrindra namaly, manantena aho fa mety ny savony sy ny crème. Tiako be ny voloko ary tena maharary ny mahita azy toy izao ?? Tsy haiko hoe ahoana no nahazoany narary tamin'izany satria avy any an-trano izy, ao an-tokontany ihany, misy ny vaksiny rehetra ary raha entiko mandehandeha izy dia misy tady ary tsy mifandray amin'ny hafa. alika???
Oriana dia hoy izy:
Salama, nahita alika kely teny an-dàlambe aho izay tsy mitanjaka ny faritra ivohony ary ny faritra ao amin'ny vatany dia nofidiako ny hanome azy fandroana miaraka amin'ny chaothrin somary voadona amin'ny rano be dia be ary tsy fantatro izay hatao.
Valiny amin'i Oriana
Manoro hevitra anao aho hametraka antiparasitika izay manafoana ny fararano, ary ento any amin'ny mpitsabo biby mba hijerena azy.
Raha manana biby bebe kokoa ianao, dia esory tsy ho an'ny alika kely.
Cheryl dia hoy izy:
Salama, manana alika 2 voan'ny scabies aho, nandroso haingana be 🙁 Tsy manam-bola hitondrana azy any amin'ny mpitsabo biby aho na dia mbola mieritreritra aza aho fa hanome fanafody lafo be ho azy: / Niezaka tamina savony tsy miandany aho ...
Valiny tamin'i Cheryl
Ho hitanao ny fanatsarany betsaka amin'ny savony.
Mamela fanasitranana anao aho fa nanana alika tena ratsy aho ary nanomana crème iray
Menaka voasarimakirana avy any an-trano ary raha tena mandroso ivermatrin dia mividy izany amin'ny mpitsabo biby rehetra, izany no ampidiriny amin'ny hoditra ho an'ny scabies, dia ampiana sentimetatra miaraka amin'ny gringa amin'ny fikarakarana izy ireo, avy eo afangaroy ary apetrany eo amin'ny alika afaka tapa-bolana aorian'izay dia tsara raha omena pilina dicloxacillin isan'andro sy ivermectin isan-kerinandro izy ary afaka fotoana fohy dia ho hitanao fa mihatsara izy
Salama, manana zanak'alika poodle kilalao aho, efa 3 volana izy, misy scabies, manana hoditra mena izy ary mihintsana ny volony, inona no azoko atao?
Angie bernal dia hoy izy:
Herintaona lasa izay dia naka alika teny an-dàlambe aho ary hita fa nanana foza matanjaka be izy, zavatra maro no nataoko taminy, solifara, inverventina, nomeko fanafody izy, nampidirina hopitaly nandritra ny 15 andro mahery izy ary tsy misy, maharitra 1 volana ny tenany salama tanteraka amin'izay teraka indray ny volony kely afa-tsy amin'ny tongony ary miverina ary miverina, tena miharatsy ary fay be ny fofony. Izy dia efa mitete ra be dia be ary mampiahiahy ahy satria avelany manerana ny trano ary manana alika kely kokoa aho, efa nampihatra zavatra maro taminy aho ary nilaza tamiko ny mpitsabo biby fa ho azy dia tsy misy famonjena intsony toa izao. mandritra ny fiainana, azafady mba omeo torohevitra aho fa azoko atao ny manao izany ka maharary ahy mafy mahita ny fijaliany toy izao ary efa notantarain'izy ireo tamiko ny momba ny euthanasia, saingy ity fanapahan-kevitra ity dia mahavaky fo.
Valiny tamin'i Angie Bernal
Manana chitzu aho mandritra ny 2 volana ary mangidihidy izy, mitsabo azy izy ireo, salama tsara ilay mpitsabo biby ary avy eo, ny mangidihidy, very fanantenana izy, tsy hitako izay hatao, apetaho eo io climatizol ... mahatonga ahy io mampalahelo satria araka ny tsindrona iray hafa dia anjarany amin'ny Alatsinainy ... manampy olona aho
Janny dia hoy izy:
Salama, tiako ny mahafantatra fa ny alika kely eny an-dalana dia alain'ny olona satria mijaly mafy izy ireo ary ny hany zavatra tadiavin'izy ireo dia ny fitiavan'ny olona iray. Omaly alina izy dia naka alika kely iray, nanaloka azy ary natory foana. Ahoana raha misy scabies io dia ho faty Dandruff fa tsy misy tsy fahampian'ny volo na aiza na aiza. Inona no hataonao amiko hivoahako. Misy zavatra vita an-trano sy mora vidy
Valiny tamin'i Janny
ceci de la cruz dia hoy izy:
Salama herinandro lasa izay ny vadiko dia nahita alika kely, nefa izy efa nisy scabies ary voan'ny otrikaretina io, kivy aho satria be ny mangidihidy izay nandratra ny vatany kely. Ary vakio ny hevitrao rehetra fa hanomboka ny zavatra niainanao aho. Niantso ny vet aho ary nilaza izy fa tsy scabies ary mazava ho azy fa, ny systoma no manome an'io. Misaotra
Mamaly an'i ceci de la cruz
mamy dia hoy izy:
Salama, ahoana no ahalalako raha mihombo ny aretin-koditra?
Valiny tamin'i Dulce
ariathna pimentel dia hoy izy:
Salama, manana ny biby fiompiko aho, ny taranany, ny saosisy, inona no fitsaboana atoroinao sy ny fandroana?
Azafady mba mila fanampiana aho
Mamaly an'i ariathna pimentel
Salama, ny alika zanako dia border collie, ary nentiko tany amin'ny mpitsabo biby maromaro izy ireo, nilaza tamiko izy ireo fa tsy azon'izy ireo ampidirina amin'ny ivermectin satria hahafaty ny alikako io. Ataoko izany ary ampandroiko, fa tsy fantatro izay savony marina, handro azy io ve aho? ary miparitaka vetivety izy io, dia nasain'izy ireo nanisy creolin ho azy aho, nefa manenjika foana izy ary mihinana azy ary toa mampitombo volo izy ary manala kely ny scabies ary atsahako ny fametrahana azy dia mivoaka indray izy. Tsy tiako ny mahita azy mba hahafahanao manampy ahy azafady azafady manana alika iray hafa aho ary tsy tiako hitranga aminy izany
Mariela dia hoy izy:
Yexibeth sy Paola: Alika an-dalam-be no nitondra mody nandritra ny telo herinandro, ny fitsaboana nentiko niaraka taminy dia ireto manaraka ireto: mandro indray mandeha isan-kerinandro amin'ny savony Vetriderm aho (dermatolojika io ary manampy amin'ny fanasitranana ny hoditra) Aorian'ny famafana ny savony dia asiko vahaolana vita amin'ny 2ml bovitraz levona anaty rano 1L, hialana amin'ny fifandraisana amin'ny maso sy ny vava, avelao izy hiasa mandritra ny 10 min ary kobanina amin'ny rano tanteraka, ny ampitson'iny fandroana dia ampiharoiko ny hoditra scabisin fampiatoana izay notendren'izy ireo, apetrako mivantana amin'ireo faritra voan'ny aretina, ny volony dia hiafara amin'ny fianjerana amin'ireo faritra voakasik'izany, fa farafaharatsiny ny ahy efa mampiseho fanatsarana ny hodiny ary tsy misy ratra intsony izy, niasa ho azy io, io dia zava-dehibe ny ilazana azy ireo fa tena ilaina ny manome sakafo tsara azy ireo ary manome azy ireo fitiavana, satria io aretina io dia mampivadi-po azy ireo.
Valio i Mariela
Mayra C. dia hoy izy:
Salama, manana ny alikako miaraka amin'ny scabies aho ary tsy haiko ny manasitrana azy, mila alternatives voajanahary aho satria eto Venezoelà ary araka ny ho fantatrareo eto, mikorontana be ny raharaha, ny antsasaky ny karama dia ampy ho an'ny antsasaky ny karama fotsiny. sakafo ary noho izany antony izany dia tsy afaka nitondra azy tany amin'ny dokotera aho, mainka izay mividy fanafody mila ny fanampianao azafady fa amin'ny fanafody ao an-trano
Valiny tamin'i Maira C.
Ola Te-hametraka fanontaniana aho hoe inona no mitranga rehefa mikarakara alika mpiandry ondry efatra alemanina aho ary manao fanompoana amin'ny alina any amin'ny condominium ary satria fasika dia nahazo alika ny alika ary tsy haiko ny manasitrana azy ireo dia tiako ho hita olona iray fanafody hosoratako holazaiko amin'ireo lehibeko izay mividy
Salama amin'ny tanàn-dehibe misy ahy dia misy alika an-dalambe, misy scabies, satria avy amin'ny arabe dia somary mahery setra izy, nandro tamin'ny savony manga bebe kokoa aho satria tsy mamela ny ho tratra. Manana scabies izy ary rehefa manasa azy aho dia toa mangidihidy kokoa. Afangaroy amin'ny vovo-mangahazo ny vovo-katsaka ary apetaho amin'ny toerana fantatrao fa mangidihidy izany. Ho fanafody tsara ve izany?
Misaotra an'izay afaka manoro hevitra ahy 🙂
Patty dia hoy izy:
Salama, Patty no anarako, manana ny alikako aho, pitbull izy ary voan'ny scabies, nentiko tany amin'ny mpitsabo biby izy ary nilaza tamiko izy fa bitika nolovaina avy tamin'ny reniny ary tsy mifindra izany. Notsindrominy zavatra ho an'ny scabies aho ary nasainy nandro tamin'ny savony dermatolojika sy shampoo isaky ny 3 andro aho, misaotra an'Andriamanitra fa nolazainay izany ary manomboka io, tsy lasa io fa mila sitrana haingana aho satria maharary ny mahita azy miaraka amin'izany.
Valiny tamin'i Patty
Tsara ny tolakandro, manana alika manana hodi-biby aho, nentiko tany amin'ny mpitsabo biby isan-karazany ary vitantsika ny nanala azy 80% saingy tsy nahavita namoaka volo aho, tsy nisy naratra intsony ary efa sitrana ny hodiny, izay Afaka mamaky aho.
Valiny tamin'i Gladis
Paola Rubio dia hoy izy:
Salama, rahampitso tolak'andro, manana ny alika pitbull mandritra ny 1 taona miaraka amin'ny farantsakely iray aho, nampiharina daholo ny zava-drehetra fa tsy misy fanatsarana fa simba indray, peel ary mivadika mena, indraindray dia ra no alaina noho ny fikororohana be dia be nanambola vola be ao anatiny ary tsy hitako fa tonga any aminy ny olana faka, tsy hitako intsony izay hatao satria izy no fiainako ary maharary ahy ny mahita azy toy izao.
Manoro hevitra ahy izy ireo mba hanao zavatra mahomby satria nilaza tamiko ireo mpitsabo biby fa olana mitohy io saingy fantatro fa raha misy marary sitrana amin'ny homamiadana dia fantatro fa tsy maintsy misy ny fanafody hanasitranana azy.
Valiny tamin'i Paola Rubio
Salama. Herintaona ny zanako kely ary avy amin'ny 2 volana ananako azy dia tonga niaraka tamin'ny mony demodectic aho, nametaka shampoos sy spays marobe, saingy mbola tsy nanao fitsaboana isam-bolana tamin'ny pilina aho ary nandritra ny iray volana dia nihatsara izy nefa niverina indray. ary izy izao dia ratsy noho ny tsy nisy. Tsy hitako intsony izay hatao ary mahakivy ny foko ny mahita azy marary. Afaka misy olona manome torohevitra ahy azafady. Ankasitrahako mandrakizay izany.
Salama alika aotra aotra izay tsy an'ny karazany manana Demodecic Scabies. Noho ny soritr'aretina atrehiny sy ny tolo-kevitr'izy ireo tamiko, dia ny manasa azy amin'ny savony sy mandro azy isan'andro ary hitako fa mihatsara be izy. fa ny andro tsy handroako azy, ny ampitson'io dia midina izy, toa tsy nihatsara izy ary izany no nandroako azy nandritra ny 3 herinandro, efa nomeko vaksiny ho an'ny scabies tsy fantatro raha io no toerana na hafanana tsy haiko
Inona avy ireo karazana alika dwarf?
Ny fiompiana alika aziatika tsara indrindra